Midowga musharraxiinta oo saluugay magacaabiis u sameeyay MD Farmaajo | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Midowga musharraxiinta oo saluugay magacaabiis u sameeyay MD Farmaajo
Midowga musharraxiinta oo saluugay magacaabiis u sameeyay MD Farmaajo
Xubnaha Midowga Musharrixiinta ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa si kulul waxaa ay uga hadleen Magacaabistii Taliyaha Kumeel gaarka ah ee NISA & la-taliyaha Amniga Qaranka ee uu Farmaajo u Magacaabay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo dhawaan Ra’iisul Wasaare Rooble uu ka qaaday xilkii Agaasimaha Hay’adda NISA.
Qoraal kasoo baxay Midowga Musharrixiinta ayaa lagu cambaareeyay tallaabada uu qaaday MD Farmaajo, iyaga sheegay in ay tahay mid baal marsan sharciga, sidoo kalena lagu carqaladeeynayo howlaha doorashooyinka.
Waxaa ay sheegeen in Goluhu ay u arkaan tallaabada uu qaaday Farmaajo mid lagu carqaladeeynayo dadaaLlada Ra’iisul, ee ku aaddan in baaritaan daah furan iyo Caddaalad la marsiiyo kiiska Ikraan Tahlil, sidoo kalena lagu xagal daacinayo doorashooyin daahfuran waqtigoodana ku dhaca.
”Goluhu waxa uu ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed in ay ogaadaan in go’aannadaas ay yihiin kuwo loogu talagalay in lagu khalkhal galiyo xasiloonida iyo ammaanka aan caga badan ku taagneyn ee dalka, saraakiisha ciidanka”
“Waxaan ugu baaqeynaa in aysan u hoggaansamin go’aannada Madaxweynaha mudda xileedkiisu dhamaaday ee sharciga baalmarsan ayaa lagu yiri” Qoraalka Midowga Musharixiinta.
Qoraalada kasoo kala baxay labada Xafiis ee Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa ay u muuqdaan kuwa sii xoojinaya khilaafka xilligaan u dhaxeeya Md Farmaajo iyo Rw Rooble.
Previous articleDHAGEYSO:Dadweynaha Dadaab oo ka hadlay sababta uu u kordhay burburka qoysaska soomaalida
Next articleRaila Odinga oo sheegay inuu is casilayo hadii uunan oofin ballanqaadyadiisa